मिडिया > जर्नल फोकस फोकस > पत्रिका फोकस यीशु 2021-01 > मेफी-बोश्सेटहरूको इतिहास
पुरानो नियमको एउटा कथाले मलाई विशेष गरी मोहित तुल्यायो। मुख्य अभिनेतालाई मेफी-बोशेथ भनिन्छ। इस्राएलीहरू, इस्राएलीहरू आफ्ना सेना, पलिश्तीहरूसित लडाइँ गरिरहेका छन। यस विशेष अवस्थामा उनीहरू पराजित भए। तिनीहरूका राजा शाऊल र उनका छोरा जोनाथनको मृत्यु भयो। यो खबर राजधानी यरूशलेम पुग्छ। दरबारमा आतंक र अराजकता फैलियो किनकि यो ज्ञात छ कि यदि राजा मारिए भने, उनको परिवारका सदस्यहरूलाई पनि भविष्यमा कुनै विद्रोह नहुने कुराको लागि मृत्युदण्ड दिन सकिन्छ। यो यस्तो भयो कि सामान्य अराजकताको क्षणमा, year बर्षे मेफी-बोशेथकी नर्सले उनलाई आफूसँगै लगे र दरबारबाट फुत्के। ठाउँको हंगामा र हलचलमा, उनले उसलाई खस्यो। ऊ बाँकी जीवन पक्षाघात भएको थियो।
नबिर्सनुहोस्, उहाँ शाही हुनुहुन्थ्यो र एकदिन अघि, कुनै पाँच बर्षे केटाले जस्तै, ऊ कुनै चिन्ताबिना दरबारको वरिपरि हिंडिरहेको थियो। तर यस दिन उसको सम्पूर्ण भाग्य अचानक बदलियो। उसको बुबा र हजुरबुबा मारिए। ऊ आफैंलाई खसालियो र बाँकी दिनहरू पक्षाघात भएको छ र अन्य व्यक्तिहरूको सहयोगमा निर्भर छ। आगामी २० बर्षसम्म ऊ दु: खी र एक्लो ठाउँमा बस्न सक्छ। यो मेफी-बोस्थ नाटक हो।
समस्या समाधान गर्न तपाईले गर्न सक्ने केहि पनि छैन। यसले अझ मेहनत गर्न वा अझ राम्रो हुन मद्दत गर्दैन। हामी पूर्ण रूपमा असक्षम छौं, हामी सोचे भन्दा बढी। भेडाहरूको हेरचाह गर्ने गोठालो केटा, राजा दाऊदको योजना अब यरूशलेममा इस्राएलको राजाको रूपमा सिंहासनमा छ। उहाँ जोनाथनको सबैभन्दा मिल्ने साथी, मेफी-बोशेथका बुबा हुनुहुन्थ्यो। दाऊदले शाही सिंहासन मात्र स्वीकार गरेनन्, तर मानिसहरूका मन जितेका थिए। उसले राज्यको विस्तार १ 15.500०० किमी २ बाट १ 2,००० किमी २ मा पुर्‍यायो। इजरायलका मानिसहरू शान्तिमय जीवन बिताइरहेका थिए, अर्थव्यवस्था राम्रो थियो र कर राजस्व बढी थियो। जीवन राम्रो हुन सक्दैन।
पूर्ण, पवित्र, धर्मी, सर्वशक्तिमान, असीम ज्ञानी भगवान, सारा ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता, मेरो पछि-पछि दौडनुहुन्छ र तपाईंको पछि-पछि दौडनुहुन्छ। हामी व्यक्तिहरूलाई खोजी गर्ने कुरा गर्छौं, आध्यात्मिक वास्तविकताहरू पत्ता लगाउनको लागि आध्यात्मिक यात्रामा मानिसहरू। वास्तवमा, परमेश्वर खोजीकर्ता हुनुहुन्छ। हामी यो सबै धर्मशास्त्रमा देख्छौं। बाइबलको सुरूमा आदम र हवाको कथाको सुरू हुन्छ, जहाँ उनीहरू परमेश्वरबाट लुक्छन्। साँझको चिसोमा परमेश्वर आएर आदम र हवालाई खोज्नुहुन्छ र सोध्नुहुन्छ: तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ? मोशाले एक मिश्रीलाई मार्नको दु: खपूर्ण गल्ती गरेपछि उनी आफ्नो जीवनको 40० वर्ष डराए र उजाडस्थानमा भागे। त्यहाँ परमेश्वर उनलाई बल्दै गरेको पोथ्राको रूपमा भेट्नुहुन्छ र उनीसँग भेटको प्रबन्ध गर्नुहुन्छ। नयाँ नियममा हामी देख्छौं कि येशूले बाह्रजना मानिसहरूलाई भेट्नुभयो र उनीहरूलाई काँधमा ठप्प ठान्दै भन्नुभयो: के तपाईं मेरो मुद्दामा सामेल हुन चाहनुहुन्छ?
येशू ख्रीष्टसँगको हाम्रो सम्बन्ध, मुक्ति, हामीलाई परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। यो भगवान द्वारा नियन्त्रित र भगवान द्वारा शुरू गरिएको छ। यो परमेश्वरले बनाउनु भएको हो। हाम्रो कथामा फर्कनुहोस्। डेभिडले अब गिलियडको बाँझो किनारमा लो-डाबरमा मेफि-बोसेतलाई खोज्न मान्छेहरूको एउटा समूह पठाएका छन। उहाँ एक्लोनेसन र अज्ञातमा बस्नुहुन्छ र फेला पार्न चाहनुहुन्न। तर ऊ भेटियो। उनीहरूले मेफि-बोसेथलाई गाडीमा हाले र उनलाई दरबारमा राजधानी लगे। बाइबलले हामीलाई यस रथ सवारीको बारेमा थोरै वा केही पनि बताउँदैन। तर म पक्का छु कि हामी सबैले कारको भुईंमा बस्नु कस्तो हुन्छ कल्पना गर्न सक्छौं। यस यात्रामा मेफी-बोशेथले कस्तो महसुस गरे होलान भन्ने डर, डर, त्रास, अनिश्चितता। दरबारको अगाडि कार ड्राइभ गर्दछ। सिपाहीहरूले उनलाई भित्र लगे र कोठाको बिचमा राखे। ऊ आफ्नो खुट्टासित स kind्घर्ष गर्दछ र डेभिड हिड्दछन्।
ऊ बुझ्छ कि ऊ ल a्गडो छ। उनीसँग दाऊदलाई दिन सक्ने केही छैन। तर यो अनुग्रहको बारेमा हो। चरित्र, परमेश्वरको प्रकृति, अयोग्य मानिसहरूलाई दयालु र राम्रो चीजहरू दिने झुकाव र स्वभाव हो। तर ईमानदार हुन गरौं। यो हामीमध्ये अधिकांश बाँचिरहेको संसार होइन। हामी यस्तो संसारमा बस्दछौं जसले भन्छन्: म मेरो अधिकार चाहन्छु र मानिसहरूलाई उनीहरूको योग्य दिन्छु। धेरै राजाहरूले सिंहासनको सम्भावित उत्तराधिकारीलाई मार्ने थिए। आफ्नो ज्यान जोगाउँदा, दाऊदले दया देखाए। उसले कृपा देखाउँदै कृपा देखायो।
सबै दोष क्षमा भयो। त्यसैले परमेश्वरले हामीलाई उहाँको अनुग्रहको धन देखाउँनुभयो। परमेश्वरको अनुग्रह कति महान र धनी छ। तपाईंले या त त्यो शब्द सुन्नुभएको छैन वा विश्वास गर्न अस्वीकार गर्नुभयो। यो सत्य हो किनकी तपाईलाई माया गरिएको छ र भगवानले तपाईलाई पछ्याउनुभएको छ। विश्वासीहरूको रूपमा हामीले अनुग्रहको सामना गरेका थियौं। हाम्रो जीवन येशूको प्रेम मार्फत परिवर्तन भयो र हामी उहाँलाई प्रेममा डुबेका छौं। हामी यसका लागि योग्य थिएनौं। हामी यसको लायक थिएनौं। तर ख्रीष्टले हामीलाई जीवनको यो अनमोल उपहार प्रदान गर्नुभयो। हाम्रो जीवन अहिले फरक छ। मेफी-बोशेथको कथा यहीं समाप्त हुन सक्छ, र यो एक उत्तम कथा हुनेछ।
मेफी-बोशेथ अब परिवारको हिस्सा हो। मलाई कथा समाप्त हुने तरीका मन परेको छ किनकि लेखकले कथाको अन्त्यमा थोरै पोस्टस्क्रिप्ट राखेको जस्तो देखिन्छ। हामी यसबारे कुरा गर्दैछौं कि मेफी-बोशेथले यो अनुग्रह कसरी अनुभव गरे र अब उनी राजासँग बस्न मानिन्छन् र उसलाई राजाको टेबुलमा खाने अनुमति छ।
वर्षौंपछि तलको दृश्य कल्पना गर्नुहोस्। राजाको दरबारमा घण्टी बज्यो र दाऊद मुख्य टेबलमा आएर बस्छन्। चाँडै पछि, धूर्त, धूर्त अम्नोन दाऊदको देब्रेपट्टि बस्छन्। तब तामार, एक सुन्दर र मैत्री युवती, देखिन्छन् र अम्नोनको छेउमा बस्छिन्। अर्कोतर्फ, सोचविहीन, चतुर, हराएको सोलोमन बिस्तारै उसको अध्ययनबाट निस्कन्छन्। अब्शालोम बगिरहेको, काँध-लम्बाइ कपालले सिट लिन्छ। त्यो साँझ योआब, साहसी योद्धा र फौज कमाण्डरलाई भोजमा निम्त्याइएको थियो। यद्यपि एउटा सिट अझै खाली छ र सबैजना पर्खिरहेका छन्। तपाईं फेरबदल खुट्टा र बैसाखीको लयबद्ध ध्वनि सुन्नुहुन्छ। यो मेफि-बोशेथ हो जो बिस्तारै टेबुलमा पुग्छ। ऊ आफ्नो सिंहासनमा चिप्लन्छ, टेबलक्लोसले उसका खुट्टाहरू ढाकछ। तपाईंलाई लाग्छ कि मेफि-बॉश्थले अनुग्रह के हो भनेर बुझे?
तपाईंलाई थाहा छ, यसले भविष्यको दृश्य वर्णन गर्दछ जब परमेश्वरको सम्पूर्ण परिवार ठूलो भोज टेबलको वरिपरि स्वर्गमा भेला हुन्छ। यस दिनमा परमेश्वरको अनुग्रहको टेबुल कपड़ाले हाम्रा सबै आवश्यकताहरूलाई समेट्छ। तपाई हेर्नुहोस्, परिवारमा आउने तरिका अनुग्रहले हो। प्रत्येक दिन उहाँको अनुग्रहको उपहार हो।
जीवनमा नयाँ मिशन
मेफि बोश्शेथ जस्तै तपाईं र म आध्यात्मिक रूपमा र आध्यात्मिक तवरले भाँचिएका छौं। तर उहाँजस्तै हामी पनि पछि लाग्यौं किनकि ब्रह्माण्डका राजाले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ र हामी उहाँको परिवारमा भएको चाहनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो अनुग्रहको शुभ समाचार हाम्रो जीवनमा बाँड्न चाहनुहुन्छ।